Soo dejisan AVG Clear 20.2.5130 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaAVG Clear
Bogga rasmiga ah: AVG Clear
AVG Clear – adeegga ah in laga saaro harta sii deynta AVG. Software wuxuu nadiifin karaa kumbuyuutarka faylasha, darawallada, gawaarida rikoodhka ah iyo xubno diiwangal ah kuwaas oo sii wadi kara ka dib marka laga saaro mid ka mid ah alaabta shirkadda. AVG Clear waxay ku siinaysaa inaad kombiyutarka ku bilawdo si toos ah u gelitaanka hab nabadgelyo leh, si looga fogaado khaladaadka ka hortagi kara ka saarida saxda ah ee hannaanka antivirus. AVG Clear ayaa tarjumeysa nidaamka antivirus ee AVG ka dibna gacanta looga saaro. Dhamaadka qaliinka saarista, faylasha qaar ayaa laga yaabaa inay ku sii jiraan diskka illaa bilaabashada ku xigta ee kombiyuutarka.
Ka saarida dhamaan qaybaha antivirus AVG
Nidaamka saafiga ah ee loogu talagalay faylasha haraaga
Taageero ka saarida dhammaan barnaamijyada AVG
Soo dejisan AVG Clear
Faallo ku saabsan AVG Clear
AVG Clear Xirfadaha la xiriira
Disk Drill – waa softiweer soo ceshan doona xogta lumay ee qaabab kala duwan kombiyuutar kuna xirma sideyaalkeeda dibedda.
software waxaa diiradda lagu saaray isgaarsiinta ammaan ee internet-ka la jaaniska ugu yar baxsiga xogta shakhsiyeed.